Tontolon`ny zavaboary Sehatra ahafahana mampandroso
Ny 5%-n’ny zava-manan’aina maneran-tany (biodiversité mondiale) dia hita eto Madagasikara avokoa saingy maro ny olana eo amin`ny tontolo iainana tao anatin`ny taona maro.
Ripaka, nanomboka tamin`ny taona 2000, ny 40% hatramin`ny 50% ny ala manerana ny nosy tamin`ny taona 1950. Velaran-tany rakotra ala 1,6 tapitrisa hektara ihany koa no very nandritra ny taona 2001 hatramin`ny taona 2013 araka ny antontanisa nivoaka tamin`ny famolavolana ny “Plan Emergence Madagascar” (PEM). Singa ahafahana mampandroso firenena iray ny toekarena manga sy maitso ka ireto avy no tokony hatao mba hanatrarana ny tanjona. Mila hamafisina ny traikefa, ady amin`ny fanondranana zava-manan’aina, hampitomboina ireo faritra ala arovana, fametrahana stratejia mba hampitomboana ny fambolen-kazo, fampivelarana ny tontolon`ny fambolena fanamafisana ny ady amin`ny fiovaovan`ny tontolo iainana. Ny tontolo iainana dia lohahevitra no jerena manokana nandritra ny andro faharoa famolavolana ny PEM tetsy Anosy.